8 Dadka dheeraad ah Large-saaraha teendhada Camping Qoyska - Shiinaha 8 Dadka dheeraad ah Large Camping Qoyska qeybiye saaraha teendhada,Factory -Fujie dibadda
Home » Products » Camping » teendhadii
8 Dadka dheeraad ah Large-saaraha teendhada Camping Qoyska
Basin groundsheet in la simay kartaa iridda ah. 2 daaqadaha caag weyn oo la daah. 2 albaabada la marokaneecooyin. Goobo ka baxsan qolalka jiifka ah. Dharka kor ku daaqadaha.
Hawo iyo uumiga HORTAGGA
flysheet damacsan agagaarka nool in ay oggolaadaan in hawo iyo in la yareeyo uumiga. sibraar A ka dambeeya qol kasta.
Sida teendhooyinkii oo dhammuba aannu marno, daryeel gaar ah ayaa la siiyey in ka xireyaashaba, kaas oo la xaqiijiyo in baadhitaanada shaybaadhka (Teendhadii dhan baaro hoos 200 litir oo biyo ah / saac / skm!) iyo imtixaanada beerta. -- flysheet caag polyurethane-dahaarka leh -- Dun shaabadeeyey adigoo koollo thermobonded -- 140 g / skm groundsheet polyetylen.
Waana imtixaanaynaa dhan teendhooyinka our in tunnel dabayl iyo saxan qoqobada u soo bandhigaan kooxda kasta oo teendhada dabaysha. teendhadii A si fiican u soo ururay oo dhan xusullada ee meel teendhada ku wareegsan waa in ay deggan;e hoos xawaaraha dabaysha lagu qiyaaso 50 km / h heer dhulka.
dhaqanka: Oo uluhu waa in lagu shubaa ka Fiiddeeda ah oo ka dhacay musmaarradii biraha hoos flysheet halka codsanaya cadaadis.
All ulaha Maro adag waxaa lagu sakhiray in ay gacanta ku ah oo tayo leh double si loo hubiyo in iska caabin aad u fiican si ay u jabiyay.
biin oo teendhadii
caabin maroojinta u fiican (6 mm steel).
HUBAAL KA DIB IYO ADEEGGA Hantida qalaad
2-damaanad sano iyadoo la isticmaalayo caadiga ah -- aanu bixino adeegyada iibka dib markii teendhadaada iyo bixiyaan bedelka qayb ka mid khaldan hoos damaanad ama dhaawac isticmaalka (kaas oo macaamiisha waxbay ushafeeci idanka kharashka): duuli sheet, qolka jiifka, ulaha, ama cover.
Filtarrada RAYS UV
dhar flysheet The shaandheysaa soo baxay rays UV leh SPF ah 30. Fadlan ogow: xaddi weyn oo UV geli karaa iyada oo albaabka u furan hal.
70*27*27cm 1 pc / kartoonka
aagga nool Hexagonal aad u ballaaran oo dhalaalaya 11.7 m². 4 qolka jiifka, 140 x 210 cm.
Dabool garbihiisa riixo ah 23.9 kg. Cabirka 38 x 38 x 58 cm
FALANQAYNTA SOO SAARKA
Saxiix Wararkii Ugu Danbeeyay warshadaha,
updates iyo dalabyada dhiirrigelin.
Add: Suite 1302, NO.6 Building, Zhongda jab City,No.822 Dongxin Road ,Degmada Xiacheng, Hangzhou 310004 Gobolka Zhejiang, Shiinaha